Iindleko zabenzi behlabathi zibhabha ngaphezulu kwe China chip abathengisi ngexabiso elicacileyo lokugembula
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindleko zabenzi behlabathi zibhabha ngaphezulu kwe China chip abathengisi ngexabiso elicacileyo lokugembula
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukunqongophala kwe-chip yehlabathi kuye kwaba nefuthe elibi kakhulu, kuchaphazela abenzi beemoto kwihlabathi liphela. Ingxaki, eyavela kwikota yesibini ye-2020 ngenxa yokuxinana kwamaziko okunyusa kunye nokunyuka kwesidingo semiconductors kwezinye iinkalo ezinje nge5G, yaxhokonxwa kukunyuka kokungaqiniseki okujikeleze ubhubhane we-COVID-19.
Abasasazi beshishini baseTshayina bahlawuliswa amaxabiso ngokugega.
Abathengisi be-Chip baphakamise amaxabiso ngamaxesha angama-40 ngaphezulu kwexabiso lokuthenga.
Umlawuli waseTshayina ubeka isohlwayo esingama- $ 388,000.
Ulawulo lukaRhulumente wase-China kuLawulo lweMarike (i-SAMR) luye lwahlawulisa abathengisi be-auto-chip abathathu be-2.5 yezigidi ze-yuan (i-388,000 yeedola) ngexabiso lokugcwala phakathi konqongophalo oluqhubekayo lwe-semiconductor yelizwe eyenzakalisa kakhulu ishishini leemoto lehlabathi.
Ababukeli abaphezulu beemarike babeke isohlwayo kwi-Shanghai Cheter, eShanghai Chengsheng Industrial kunye nase-Shenzhen Yuchang Technologies emva kophando, olwasungulwa ngumlawuli ngo-Agasti, bafumanisa ukuba abathengisi be-chip banyusa amaxabiso e-chip car ukuya kuthi ga kwi-4000% ngaphezulu kwexabiso lokuthenga.
"I-SAMR izakuqhubeka nokujonga kakhulu isalathiso sexabiso le-chip, inyuse izinga lethu lokubeka esweni amaxabiso, kwaye sithintele imisebenzi engekho mthethweni enje ngokuqokelela kunye nokunyusa amaxabiso ukugcina isandi sentengiso, "utshilo umlawuli kwingxelo.
Kwimarike enikezela ngokulinganayo kunye neemfuno, inqanaba lokumakisha labathengisi be-auto-chip liqhele ukuba phakathi kwe-7% kunye ne-10%, ngokwembonisi. I-SAMR yaqaqambisa ukuba ukunyuka okumangalisayo kubangele ukugcwala kovimba phakathi kwabavelisi bezinto kunye nee-automakers, okunyusa ukungalingani kwemfuno yokubonelela kunye nokubangela ukonyuka kwamaxabiso.
Ukunqongophala kwe-chip yehlabathi kuye kwaba nefuthe elibi kakhulu, kuchaphazela abenzi beemoto kwihlabathi liphela. Ingxaki, eyavela kwikota yesibini ye-2020 ngenxa yokuxinana kweziseko kunye nokwanda kwesidingo se-semiconductors kwezinye iinkalo ezinje nge5G, yenziwa mandundu kukungaqiniseki okonyukayo okujikeleze umsindo COVID-19 bhubhane.
Abasemagunyeni baseTshayina bebejonge ukunciphisa uxinzelelo kwicandelo lezithuthi zelizwe ekuthiwa linika ingxelo ngesithuthi ngasinye sesithathu esenziwe emhlabeni.
Icandelo lokuvelisa iimoto e-China, elona lizwe likhulu kuzo zombini izithuthi ezisebenzisa i-petroli kunye nezombane, liye lasokola kakhulu ngenxa yokunqongophala komhlaba. Ngokwedatha yaseburhulumenteni, ilizwe lixhomekeke ekungenisweni elizweni ngaphezulu kwe-90% yeemveliso zeemiconductor zalo.
Ngokwedatha elandelwe yi-SAMR, ukuveliswa kweenqwelo zabakhweli ngoJuni kubonise ukwehla kwenyanga ngaphezulu kwe-3.8%, ngelixa ukuthengisa kuye kwehla nge-4.7%.